OTU ESI EHICHAPỤ AKAỤNTỤ ICQ - ICQ - 2019
Otu esi ehichapụ akaụntụ ICQ
Ezigbo usoro nkwụ ụgwọ na Russia na ụwa na-enye ndị ọrụ ha ohere ịnye kadị akụ na ọnọdụ dị mma, nchekwa ego dị mma na ịnweta nguzozi. Otu usoro dị otú a bụ QIWI Wallet.
Otu esi enweta kaadị QIWI Visa
Ruo ogologo oge, usoro QIWI bụ otu n'ime ole na ole nwere map dị n'aka onye ọrụ ọ bụla. Ugbu a, nke a abụghị ihe ọhụrụ, ma Kiwi adịghị ala n'iyi. Kemgbe ọtụtụ afọ, ụlọ ọrụ ahụ agbanweela iwu ya ma nweta ohere ọhụụ, ebe ọ bụ na ọnọdụ ndị a abawanye uru nye ndị ọrụ.
Hụkwa: Ịmepụta akpa ego QIWI
Enwere ike ịnye kaadị Visa site na usoro ịkwụ ụgwọ QIWI n'ụzọ dị mfe na ngwa ngwa, maka nke a, ị ga-eji oge ole na ole pịa òké ma tinye data dị mkpa maka ịdenye kaadị ahụ. Ka anyị nyochaa usoro a n'ụzọ zuru ezu ka e wee ghara ịjụ ajụjụ ọ bụla.
Nke mbụ, ịkwesịrị ịbanye n'ime akaụntụ onwe onye nke onye ji usoro ịkwụ ụgwọ ahụ na-eji aha njirimara na paswọọdụ ma ọ bụ site na netwọk mmekọrịta, ma ọ bụrụ na ejikọtara ha na akpa.
Na nchịkọta nhọrọ nke saịtị ahụ n'okpuru akara ọchụchọ, ị nwere ike ịchọta ihe ahụ "Kaadị ego"nke ị ga-eji pịa iji malite usoro ndebanye aha nke kaadị Qiwi.
Ugbu a ọ dị mkpa na ngalaba "Kaadị QIWI" pịa bọtịnụ "Zụọ kaadị".
Na peeji na-esonụ, a ga-enwe ntakịrị nkọwa nke kaadi Qisaị Visa plastic, nke a nwere ọnụọgụ abụọ ọzọ. Onye ọrụ ga-ehichapụ "Họrọ kaadị", iji gaa, n'otu n'otu, na nhọrọ nke kaadị mmasị.
I nwekwara ike pịa ihe ahụ "Ihe gbasara map", iji chọpụta ego, ọnụahịa, ókè, ọrụ na ozi ndị ọzọ gbasara ụdị nke ọ bụla.
N'oge a, onye ọrụ ga-eme nhọrọ, nke kaadị ọ chọrọ. Enwere nhọrọ atọ, nke ọ bụla dịtụ iche na ndị ọzọ. Ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ amaghị ihe ị ga - ahọrọ, ị nwere ike ịgụtakwu ihe gbasara kaadị ọ bụla site na ịhọrọ ihe ahụ na nzọụkwụ gara aga "Ihe gbasara map". Dịka ọmụmaatụ, were nhọrọ kachasị mma - QIWI Visa Plastic na mgbawa (kaadị a na-adị ugbu a). Push "Zụrụ kaadị".
Iji tinye aha na kaadị ahụ, ị ​​ga-etinye data nkeonwe gị, nke a ga-egosipụta na nkwekọrịta na na kaadị kaadị (aha mbụ na aha ikpeazụ). Tinye data niile dị mkpa na mpaghara kwesịrị ekwesị na saịtị ahụ.
Ntakịrị akwụkwọ mpịakọta na ibe, ị nwere ike ịhọrọ usoro nnyefe nke kaadị ahụ. Họrọ mba ma zipụta ụdị nke nnyefe. Dịka ọmụmaatụ "Russian Post ...".
Ebe ọ bụ na e zigara onye ozi na ozi ahụ naanị adreesị, ọ ghaghị ịbanye na mpaghara ndị a. Ọ dị mkpa iji jupụta ndepụta, obodo, n'okporo ámá, ụlọ na ụlọ.
Ozugbo esinyere onye ọrụ na adreesị data, ị nwere ike pịa "Zụrụ"iji gaa na njedebe ikpeazụ nke kaadị kaadị ma nye ya iwu.
Na-esote, ịkwesịrị ịkwado data niile e batara site n'ịlele ha na mbụ. Ọ bụrụ na ihe niile ziri ezi, ịkwesịrị pịa bọtịnụ ahụ. "Kwenye".
Ekwentị kwesịrị ịnweta ozi na koodu nkwenye, nke a ghaghị ịbanye n'ime windo kwesịrị ekwesị wee pịa igodo ọzọ "Kwenye".
Ọtụtụ mgbe, ozi na nkọwa kaadị na koodu PIN ga-abịarute ozugbo. A na-edegharị PIN na leta ahụ na kaadị n'onwe ya. Ugbu a, ichere maka kaadị na-abata na mail na ihe dị ka izu 1.5 - 2.
Mgbe ogologo oge ichere maka kaadị (ma ọ bụ obere oge, ihe niile dabere na usoro nnyefe na ọrụ nke Russia Post), ị nwere ike ịmalite iji ya na ụlọ ahịa na n'Intanet. Mana tupu nke ahụ, ịkwesịrị ime obere ihe - ime ka kaadị rụọ ọrụ iji rụọ ọrụ na ya n'enweghị nsogbu.
Mbụ ị ga-achọ ịlaghachi na akaụntụ nke aka gị ma gaa na taabụ ahụ "Kaadị ego" site na isi menu nke saịtị.
Naanị ugbu a na ngalaba "Kaadị QIWI" mkpa ịhọrọ bọtịnụ ọzọ - "Kaadị Kaadị Ọrụ".
Na peeji na-esonụ, a ga-agwa gị ka ị tinye nọmba kaadị, nke a ga-eme. A na-ede nọmba ahụ n'ihu n'ihu QIWI Visa Plastic. Ọ na-anọgide na-pịa bọtịnụ ahụ "Kaadị Kaadị Ọrụ".
N'ebe a, ekwentị kwesịrị ịnata ozi gbasara ọganihu nke kaadị ahụ. Ọzọ, na ozi ma ọ bụ leta, PIN-koodu maka kaadị aghaghị igosi (a na-egosipụtakarị ma n'ebe ahụ ma n'ebe ahụ).
Nke ahụ bụ otu ị nwere ike isi nyefee kaadị site na nkwụnye ego QIWI obere akpa. Anyị gbalịrị ịkọwa usoro nke ịbịpụta ma rụọ ọrụ kaadị ahụ dị ka nke ọma ka o wee ghara inwe otu nsogbu. Ọ bụrụ na ihe ka dị anya, dee ajụjụ gị n'ihe ndị a, anyị ga-anwa ịchọta ya.
https://termotools.com ig.termotools.com © ICQ 2019